Hay'adda OSPAD oo Tababar ku qabatay Cadaado (Sawirro) - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Hay’adda OSPAD oo Tababar ku qabatay Cadaado (Sawirro)
June 26, 2018 admin1216
Hay’adda OSPAD ayaa magaalada Cadaado ku qabatay tababar ku saabsan Barashada Dowladnimada iyo Ka qeybgalka go’aan qaadashada siyaasadda. Tababarkan ayaa waxaa ka qeybgalay dad ka kala socda qeybaha Bulshada oo ku u dhaafaya 80 ruux.
Tababarkan ayaa socday laba maalmood 24-25 June 2018, ayaa ka dhacay Hotel Central Magaalada Cadaado. Waxaana tababarkan maalgaliyey Hay’adda NED (National Endowment for Democracy).
Gudoomiye ku xigeenka Degmada Cadaado Nuur Yarow Xeyle ayaa furay tababarkan, isagoo dadkii ka qeybgalayey kula dardaarmay in ay aqoonta uu tababarkan xanbaarsan yahay ay kala haraan macalimiinta bixinaysa.
Sidoo kale Madaxa Hay’adda OSPAD Maxamed Cabdullaahi ayaa kula dardaarmay dadka ka faa’iideysanaya tababarkan in ay aqoonta ay barteen u gudbiyaan dadka kale ee aan fursadda u helin inay ka qeybgalaan tababarkan.
Ka qeybgalayaasha oo loo qeybiyey kooxo ayaa ka dooday su’aalo ka hadlaya dowladda wanaaga iyo sida ay uga qeyb qaadan karaan go’aanada siyaasadeed ee saameynta kuleh noloshooda. waxaana ka soo baxay qodobo ay soo saareen kooxaha.
Gabangabadii Madaxa Hay’adda OSPAD Maxamed Cabdullaahi ayaa kula dardaarmay dadka ka faa’iideysanaya tababarkan in ay aqoonta ay barteen u gudbiyaan dadka kale ee aan fursadda u helin inay ka qeybgalaan tababarkan.
Wadahaladii Galmudug iyo Ahlu-Sunna oo Muqdisho Markale ka Furmaya
Aw-dheegle:lawareegida CXD kadib qarixii labaad oo ka dhacay maanta